3 Zvikonzero: Nei Akawanda Makuru Idhi Mapurojekiti Akatadza? - NewGenApps
analytics, Big Data, Big Data Analytics, Data Processing, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Big Data inotsanangura yakawanda kwazvo mavhoriyamu e data (ese akarongeka uye asina kurongeka) iyo pakuwongorora inogona kuburitsa mapatani, masangano, uye maitiro mune yakatarwa data. Big Data inoputira bhizinesi zuva nezuva. Zvinoitwa nemabhizinesi neiyi hombe huwandu hwedata hwakakosha zvakanyanya kupfuura huwandu hwedata irwo. Big Data nzwisiso inotungamira mukuita zvirinani kutora sarudzo uye zvine hungwaru bhizinesi kufamba.
Dhata hombe rinowanzo tariswa sedambudziko nemakambani akasiyana siyana sezvo iyi data iri yakaoma kugadzirisa nemaitiro echinyakare anoenderana nehukama hwehukama. Pane kupokana, Big Data inopa mikana yakakura yekuvandudza nekushandura mashandiro anoita bhizinesi rako. Yakakura data inopa mhando nyowani yemutengo, zvigadzirwa, nzira nyowani dzekudyidzana nevatengi uye vanobatirana navo, kuwedzera mukushanda kwekuita, kukura kwemikana mitsva yemusika, kuongorora njodzi, uye kutevedzera zviyero.
Big Data inotsanangurwa zvakadzama kuburikidza ne4 V's. Iwo mana eV Big Data:
Vhoriyamu inomiririra iyo chaiyo huwandu hwedata huripo. Ukuru hweiyi data hwakanyanya kukwirira sezvo ichiunganidzwa pamusoro pemakore. Sekutsvagurudza, 90% yedata iyi inounganidzwa pamusoro pemakore maviri apfuura chete.
Velocity inoratidzira kumhanya uko indasitiri iri kuchinja uye kutora matanho pane akakodzera data. Mabhizinesi akaremerwa nedatha inoitika uye isisina basa. Izvo, saka, zvakakosha kuongorora iyi yakawanda yedata uye kunatsiridza chete iro rakakodzera data. Izvi zvinobatsira mukutora chaiyo bhizinesi sarudzo.
Mhando dzakasiyana dzinoreva mhando dzakasiyana dhata sosi uye mafomu. Aya masosi kazhinji ari maWebhusaiti, masisitimu ePoint-of-Sale, CRM uye ERP masystem, nezvimwe.
Izvi zvinomirira kusava nechokwadi nezve data riripo. Nekuda kwehuwandu hwakasiyana, huwandu, uye velocity, iyo data yakanatswa inoda kuve yakajeka kuti ikwanise kumwe kuongorora.
3 Zvikonzero Zvikuru zvekutadza kweBig Data Projects
Masangano mazhinji, nhasi, ari kuda kushandisa mari inorema paBig Data asi iyo yakadzika haifanire kuregererwa Sekureva kwekutsvagurudza, 92% yemasangano ichakamira mukufunga kwekutanga pazvirongwa zveBig Data. Nei zvichidaro? Ivo vanotya kuisa mari yavo yakaoma yavakawana nekuda kweye yakakwira mwero wekutadza kunowanikwa nevamwe mumusika. Zvakanaka, ngatinzwisise kuti ndezvipi zvikonzero zvinoita kuti Big Data mapurojekiti atadze?
1. Maitiro atinofunga nezve Big Data haana kunaka:
Nzira iyo Big Data inorapwa nayo senge kutanga kunozivikanwa nemagumo anozivikanwa kwete nerwendo rwekukurumidza runotungamira kuburikidza nekutsvaga kwese. Uchishandisa Big Data iwe unogona kuwana mapatani ekubudirira kwebhizimusi remangwana. Nekudaro kuti uwane mhinduro iwe unogona kutora kutsvagurudza mupfungwa asi haufanire kutarisira yakatsanangurwa kuburitswa mairi. Big Data ndeye kungogara uchitsvaga kuti uwane mazano anobatsira pane kuwana mhedziso dzakagadziriswa munguva pfupi. Iko kukosha kwechokwadi kweiyi data kunoonekwa kana yaiswa mune zvebhizinesi mamiriro zvimwe ingori hombe huwandu hwedata.
Chimwe chikonzero chikonzero chekushomeka kwekutsvagisa kwakakodzera muzvirongwa zveBig Data kushaikwa kwehunyanzvi hwesainzi data. Kunyangwe makambani anoshandisa mhinduro dzekukurumidza uye maturusi senge ETL, Hadoop, SAS, nezvimwewo, zvishandiso izvi hazvigone kuzadza hunyanzvi hwega wega. Iyo nhanho yehunyanzvi uye ruzivo zvakare inotamba basa rayo mukuzvipira mukutsvaga kwakaringana muBig Data mapurojekiti. Kuwedzera kuchinjika uye yakareba nguva inodiwa pakuedza kwakadai uye kuwana ruzivo rune zvibereko kubva muBig Data.
2. Chikanganiso chakakura maererano neRI:
Panofanirwa kuve nenzvimbo yakawanda yekutadza uye kudzidza pakutanga. Kusvika parizvino, makambani anga achiisa mari chete chikamu chidiki chemari yavo mukuchengetedza nekutarisira chikamu cheBig Data. Mazhinji eisina-kutorwa data anotorwa kubva kuongororo zvichibva kune vatengi mhinduro, maemail, evanhu vezvenhau, uye vagoverani.
Kana makambani akatarisana nevhoriyamu chaiyo, zvakasiyana, uye velocity yeiyo Big Data chaiyo, vakatadza kuita. Kuti uwedzere kwariri, mabhizinesi aisakwanisa kurarama nemari inorema inofanirwa kupihwa mukugadzira yavo iripo data setup mune synch neiyi nyowani matambudziko.
Izvi zvakakonzeresa kuti masangano agadzire iwo chaiwo mavhezheni emadhata anotungamira kududziro isiriyo.
3. Kushaya Kujeka:
Iwo mapurojekiti anobata neBig Data haana kusungirwa zvakakwana kune zvakasarudzika zvinangwa. Aya mapurojekiti anongofungidzirwa sesainzi asina zvinangwa zvebhizinesi kana metric. Kuti uwane iyo yakawanda kubatsirwa kubva mairi, unofanirwa kunongedzera yako Big Data kune chaicho chinodiwa kana dambudziko rebhizinesi rako. Kuti uratidze kudyara kwako kune Big Data mapurojekiti, iwe ungangoda kuratidza mhedzisiro yako uchienderera. Icho chinodikanwa ndechezvinodiwa zvebhizinesi zvine kukurumidza uye nekukurumidza kuwana data. Mabhizinesi anotarisa yakaderera kwazvo mitengo yezvinhu zvinotungamirwa nedata.
Kana ikashanda nemazvo, Big data inopa akasiyana siyana mikana kune mabhizinesi nhasi uye mune ramangwana. Dambudziko riri mukushayikwa kwehunyanzvi hunyanzvi uye kutadza mukuitwa kwakakodzera. Iyo ingori nyaya yenguva apo Big Data inova chikamu chakakosha chebhizimusi kutora sarudzo. Kana mhosho idzi dzikachengetedzwa ipapo zvichave nyore kwazvo kuita chero zano reBig Data. Imwezve nzira yekuwedzera mikana yako yekubudirira ndeye kushandisa maturusi akakodzera epurojekiti chaiyo. Kuziva maturusi ekushandisa kune makuru kuona data tarisa iyi blog: